ANTOKO FREEDOM : Manameloka ny fanakorontanana sy ny fanaratsiana ataon’ny mpanohitra
Manameloka ny fanakorontanana amin’ny endriny rehetra volen’ny mpanohitra bontolo amin’izao fotoana ny antoko Freedom. 25 mars 2021
Araka ny nambaran’izy ireo nandritra ny tafa ho an’ny mpanao gazety omaly, tsy manana paikady matotra afa-tsy ny fanelezana vaovao tsy marina sy lainga ary fanasoketana olona amin’ny alalan’ny tsaho hikatsahana fanakorontanana ny mpanohitra ankehitriny. Nampahatsiahy ity antoko ity fa izy ireo dia mijanona ho antoko sosialy sy Demokraty ao amin’ny hery ankavia izay mitolona amin’ny fampanjakana ny fahalalahan’ny isam-batan’olona toy ny fahalalahana maneho hevitra, saingy kosa tsy maintsy ao anatin’ny fanajana ny lalàna manan-kery sy ny soatoavina neken’ny rehetra.
Nanantitra koa izy ireo fa : “ny fahalalahana miteny sy ny fanaovana hetsika mahakasika izany dia tsy fahalalahana gaboraraka na zo hanongana ny Fitondrana misy. Ny demkorasia koa dia tsy midika fahafahana manitsaka ny lalàna velona”.
Fanaratsiana avy ao anatiny
Nahatsapa koa ny antoko Freedom fa tato ho ato izay dia nahazo vahana ny finiavana ankitsirano amin’ny fanaovana asa fanasoketana sy fanaratsiana ny hafa avy amin’ireo ivelan’ny Fitondrana. Misy koa, hoy ity antoko ity, ireo avy ao anatin’ny Fitondrana ihany saingy mikendry ny filoha nasionalin’ny antoko, izay Minisitry ny serasera amin’izao fotoana no sady mpitondra tenin’ny governemanta. “Manameloka tanteraka amin’ny heriny rehetra izany fanasoketana izany ny antoko ary mibaribary toy ny vay an-kandrina fa entina hanaratsiana azy eo imason’ny mpiara-monina sy ireo lehibeny ao anatin’ny Fanjakana izany. Mazava ny tanjon’ireo mpanaratsy dia ny hamparefo ny Fitondrana amin’ny ankapobeny izay ny Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy, filoha nasionalin’ny antoko no mpiaro fatratra ny zava-bitan’ny Fitondrana”, hoy ny fanambaràn’i Haja Rasoanaivo, Sekretera jeneralin’ny antoko Freedom. “Tohina ny antoko manoloana ny fanenjehana ny filoha nasionaly sy ny vadiny izay mifototra amin’ny famadihana ny vaovao tena marina, ny lainga ary tsahon-dresaka tsy mitombina. Sanganehana ny antoko fa dia mirefarefa amin’ny tany tanteraka ny fanehoan-kevitr’ireo mpanao politika amin’ny fankahalana miendrika fanalam-baraka kanefa tsy mitondra avo ny ady hevitra eto amin’ny Firenena”, hoy hatrany ny voalaza.
Nanentana koa ity antoko ity fa raha fanakianana ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ity antoko ity mahakasika ny fomba fitantanany ny minisitera iadidiany, na ny andraikiny amin’ny maha mpitondra tenin’ny governemanta azy, na koa ireo soatoavina izay arovany no fototry ny ady hevitra dia azo atao tsara ny mifampidinika sy mifandresy lahatra. “Tsy nandray tombontsoa manokana tsy ara-drariny araka ny andraikiny ny filohan’ny antoko Freedom hatramin’ny naha minisitry ny serasera azy, tsy manana orinasa na mivantana na ankolaka, tsy nahazo asa ao anatin’ny tsenambaro-panjakana, tsy mbola nanome tombontsoa namana na nanao kiantranoantrano, tsy nanome fahazoan-dalana mahakasika ny haino aman-jery na iray aza hatramin’izay nitantanany ny minisitera misahana ny serasera, tsy mbola nampiditra mpiasam-panjakana nangalana vola ho sandany”, hoy hatrany ny Sekretera Jeneralin’ny antoko.
Manamafy ny fanohanana
Ankoatra izay, nanamafy hatrany ny fanohanany ny Fanjakana mijoro ankehitriny ny antoko ary nanantitra hatrany fa maro ny zava-bitan’izao Fitondrana izao. Nanasa ireo mpanohana izao Fitondrana izao koa izy ireo tsy ho tafalatsaka anaty vela-pandrik’ireo Mpanohitra satria ny fambolena korontana dia efa ao anaty kajy sy politika maloto kononin’izy ireo fatratra amin’izao fotoana. “Handrava firaisan-kina fototry ny fahombiazana no ataon’ireo manakorontana ary tsy hisy hanana tombontsoa amin’izany”, hoy hatrany ny voalaza. Nankasitrahan’ny antoko Freedom koa ankoatra izay ny paikady hiatrehana ny valanaretina covonavirus izay napetraky ny Fitondram-panjakana ary midera ny fahamailoan’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina izy ireo amin’ny fandinihina lalina sy fahaizana mandray fanapahan-kevitra mahakasika ny vaksiny fanefitry ny coronavirus. “Manohana hatrany ny ezaka rehetra fampahafantarana sy fisorohana io areti-mifindra io izahay ary mankasitraka ny fanapariahana ny tambavy CVO sy ny CVO+”, hoy hatrany ny fanambaràna nataon’ny Freedom.